The Islands Of The Bahamas dia nanambara ny kaody nohavaozina sy ny fidirana fidirana
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Bahamas » The Islands Of The Bahamas dia nanambara ny kaody nohavaozina sy ny fidirana fidirana
Inona no vaovao any The Bahamas amin'ny Mey
Ny Islands of the Bahamas dia nanambara androany fa misy protokol fidirana an-tserasera izay ahafahan'ny mpitsidika mankafy tsara kokoa sy mankafy kokoa ny traikefa fialan-tsasatra The Bahamas.
Ny 1 Novambra 2020 dia mangataka ny mpandeha rehetra ny Bahamas:
1. Makà fitsapana COVID-19 RT PCR dimy (5) andro alohan'ny fahatongavana.
2. Mangataka a Visa fitsangatsanganana fahasalamana any Bahamas amin'ny Travel.gov.bs
3. Mandritra ny faharetan'ny fitsidihana, fenoy a fanontaniana momba ny fahasalamana an-tserasera isan'andro ho an'ny tanjona soritr'aretina.
4. Makà COVID-19 Fitsapana antigen haingana amin'ny andro faha-5 ny fitsidihana (raha tsy miala amin'ny andro 5).
5. Manaova sarontava foana ary elanelam-piaraha-monina foana amin'ny toerana imasom-bahoaka.
Ho fanampin'izany, manomboka ny 14 Novambra 2020, ny mpitsidika rehetra dia takiana hisafidy ny tsy maintsy atao Fiantohana ara-pahasalamana COVID-19 rehefa mangataka visa Visa momba ny fahasalamana. Ny fiantohana dia handrakotra ireo mpandeha mandritra ny fotoana fijanonany ao The Bahamas.
Toy izao manaraka izao ny famaritana ireo paikady vaovao:
1. COVID-19 RT-PCR Fitsapana
Ny olona rehetra mankany The Bahamas dia tsy maintsy mahazo fitsapana COVID-19 RT-PCR (swab) ratsy izay nidina mihoatra ny dimy (5) andro alohan'ny datin'ny fahatongavana.
Ny anarana sy ny adiresin'ny laboratoara, izay nanaovana ny andrana dia tsy maintsy aseho mazava amin'ny valin'ny fitsapana.
Ankizy folo taona (10) sy ambany.
Ny mpanamory sy ny ekipa kaompaniam-pitaterana an'habakabaka miasa izay mijanona mandritra ny alina ao The Bahamas.
2. Visa fitsangatsanganana fahasalamana any Bahamas
Raha vao manana valiny fanadinana COVID-19 RT-PCR ratsy dia miangavy amin'ny Visa fitsangatsanganana fahasalamana Bahamas ao TRAVEL.GOV.BS
Tsindrio ny Tab Iraisam-pirenena ary ampidiro ny valin'ny fitsapana sy antontan-taratasy ilaina hafa.
Ny sarany ho an'ny Visa fitsangatsanganana fahasalamana any Bahamas, ao anatin'izany ny fitsidihana Andro 5 Rapid Antigen ary fiantohana ara-pahasalamana tsy maintsy atao, dia ireto manaraka ireto:
40 $ - Ireo mpitsidika mijanona hatramin'ny efatra alina sy dimy andro.
40 $ - olom-pirenena sy mponina miverina.
60 $ - Ireo mpitsidika mijanona mihoatra ny efatra alina.
Maimaimpoana - Ankizy 10 taona no ho midina
1. Araho ny Protokol Monitoring:
Izay mpitsidika rehetra izay mampiseho soritr'aretina COVID na oviana na oviana mandritra ny fotoana ijanonany dia takiana izy ireo handray ny Rapid Antigen Test ary hahazo valiny ratsy alohan'ny hamelana azy hanohy ny fialan-tsasatr'izy ireo.
Raha mizaha toetra tsara ny olona iray dia takiana izy ireo hanaraka ny fitsapana swab COVID-19 RT-PCR.
2. Fitsapana antigen COVID-19 haingana (raha ilaina):
Ny olona rehetra izay mijanona ao The Bahamas lava kokoa noho ny efatra alina / dimy andro dia takiana amin'ny fitsapana antigen COVID-19 haingana.
Ny mpitsidika rehetra miainga afaka dimy andro na alohan'ny dimy andro tsy takiana mba hahazoana an'ity fitsapana ity.
Ny fitsapana haingana dia mora, haingana ary hitondra valiny ao anatin'ny 60 minitra na latsaka miaraka amin'ny valiny omena amin'ny alàlan'ny hafatra an-tsoratra sy mailaka SMS.
Ny fananana trano fandraisam-bahiny dia hanome fampahalalana mifandraika amin'ny fandaminana fitsapana, raha ny hafa kosa hanamora ny fitsapana haingana takiana amin'ny vahininy.
Ny olona rehetra amin'ny yachts sy ny asa tanana mahafinaritra hafa dia ho afaka hanao fandaharana amin'ny fitsapana haingana takiana aminy amin'ny seranan-tsambo fidirana na amin'ny tranokala mifandraika amin'izany.
Ny mpitsidika hafa rehetra, ny mponina ary ny olom-pirenena miverina dia afaka manamboatra ny fitsapana haingana ataon'izy ireo amin'ny seranan-tsambo fidirana na amin'ny tranokala mifandraika amin'izany.
Na eo aza ny fameperana ara-pahasalamana izay azo ampiharina tsindraindray, ny mpandeha rehetra manara-dia ireo kaomandy vaovao ireo dia avela hivezivezy sy hijery ny hatsarana sy ny kolontsaina mivelatra ao Bahamas mihoatra ny faritry ny hotely na trano fonenan'izy ireo hafa.
Ny Bahamas dia nosy iray misy nosy 700 mahery sy cays, miparitaka mihoatra ny 100,000 kilaometatra toradroa, izay midika fa ny toe-javatra sy ny tranga an'io virus io dia mety samy hafa isaky ny nosy 16 misy mandray mpitsidika. Ny mpitsangatsangana dia tokony hanamarina ny toerana misy ny nosy alohan'ny fitsidihany Bahamas.com/travelupdates, izay ahafahan'izy ireo mandinika ihany koa ny fepetra takiana amin'ny mpikambana tafiditra ao amin'ny antokony alohan'ny hamandrihana dia.
Ny Bahamas dia niasa tamim-pahazotoana tamin'ny ezaka nataony mba hampihenana ny fiparitahan'ny COVID-19 manerana ny nosy, ary ilaina ireo fepetra ireo mba hiantohana ny faharetan'ny raharaha. Ny fahasalamana sy ny fahasalaman'ny mponina sy ny mpitsidika no mijanona ho laharam-pahamehan'ny tompon'andraikitra amin'ny fahasalamam-bahoaka. Zava-dehibe anefa ny manamarika fa noho ny fahamendrehan'ny toe-javatra COVID-19, na ny Bahamas na ny manerantany, dia azo ovaina ny protocole.
Sefon'ny hotely indianina: niova ny fironana amin'ny fampiantranoana olona maneran-tany fa vetivety ihany